Global Voices teny Malagasy » Taratasim-pifandraisan’ny Mpandika : Hetsipanoherana, Webinars Maimaimpoana, Ary Zavatra Maro Hafa! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jona 2019 5:39 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika Sylvia Aimée
Mona Baker, Mpampianatra amin'ny Fianarana Fandikanteny ao amin'ny Anjerimanontolo ao Manchester, no manolotra fidirana maimaimpoana ho antsika amin'ireo ampahany amin'ny bokiny eto ! Ity ampahany manokana ity dia mifantoka amin'ny “tontolon'ny fandikàna ao anaty toekarena ara-politika tamin'ireo fotoana fanoherana ankehitriny, tamin'ny fampiasana ny revolisiona ejiptiana ho ohatra”. Raha toa tsy mampihiakiaka ny GV Lingua izy ity, dia tsy haiko intsony ny inona!
Raha tianao io vakiteny io, topazo maso ny tafatafa iray izay nifanaovany tamin'i Philip Rizk, mpanatontosa sarimihetsika sady mpanoratra monina ao Kairo, mitondra ny lohateny hoe “Firaisankina, fandikàna ary ny politika fanaovana ankilabao “.
Vao avy nanampy fiteny vaovao 30 ireo olona tsara ao amin'ny Transparent Language Online  ho an'ireo mpianatra tsy miankina, ahitana ny fiteny arabo (Levantina), ny Bengali ary ny Quechua! Jereo eto  io ary misorata anarana hahazo andrana maimaimpoana iray raha toa ianao liana!
Webinars  mpandika ao amin'ny ProZ
Vao vao tsara! Manomana webinars (kaonferansa atao ety anaty aterieto) maimaimpoana marobe ho an'ireo mpandikatenyny ProZ (!) Tsindriho eto  mba hisoratanao anarana! Ireo lohahevitra dia miainga amin'ireo fitaovana CAT mankamin'ireo tahirintsaina fandikàna sy zavatra hafa marobe! Nomarihinay ve fa hoe maimaimpoana izy ireo?
Olona samihafa anatina fiteny samihafa ve isika? Mamakafaka an'ity lohahevitra ity i Ana Menéndez ao anaty lahatsoratra vao haingana teo amin'ny Literary Hub . Manoratra izy hoe, ” […] mampita ilay isika ao anatintsika lalina ao ihany koa mba hiverina amintsika ny fiteny, sahala amin'ny hoe lambampaty ireo teny ary nanome endrika ny tontolontsika anatiny. Ny fiteny, fahefana sy fanoherana io, fampiatiana sy fanilihana.” Mamakia betsaka ary lazao anay izay eritreritrao mikasika ny ‘izaho’-nao izay asehonao amin'ny alalan'ny teny iresahanao!”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/16/140330/
 Firaisankina, fandikàna ary ny politika fanaovana ankilabao: http://www.monabaker.org/?p=1804
 lahatsoratra vao haingana teo amin'ny Literary Hub: http://lithub.com/are-we-different-people-in-different-languages/